« Fampihavanana sy fanarenana ny firenena »: “Tsy mifanaraka amin’ny kolontsaina ny fihariana” | NewsMada
« Fampihavanana sy fanarenana ny firenena »: “Tsy mifanaraka amin’ny kolontsaina ny fihariana”
“Be loatra ny elanelana eo amin’ny tanàn-dehibe sy ny any ambanivohitra. Tsy hay mizara ny harim-pirenena, tsy mitovy ny Malagasy. Vao mainka mihamahantra ny any ambanivohitra: tsy misy toeram-pitsaboana, tsy misy sekoly, tsy misy lalana, tsy misy herinaratra, tsy misy fandriampahalemana … Betsaka ny tsy miasa hita amin’ny tanàn-dehibe sy hita any ambanivohitra”. Ireo ny fanamarihana nataon-dRajaonson Huges, nanazava momba ny fihariana na “économie” (conjuncture no toekarena), nandritra ny famelabelaran-kevitra momba ny “Fampihavanana sy fanarenana ny firenena”, omaly, tao amin’ny Centre sociale Arupe, Faravohitra.
“Sarotra ny mampandroso an’i Madagasikara satria tsy mitady afa-tsy vola ny mpitondra mifandimby. Mahomby eo amin’ny fitondrana izay hoe mahay mifampiraharaha amin’ny mpamatsy vola. Tsy misy mihevitra izay drafitra mifanaraka amin’ny kolontsaina malagasy hampandrosoana ny fihariana”, hoy Rajaonson Hugues. Mitaky saina amam-panahy anefa ny fampandrosoana, raha ny fanazavan’ny nanao famelabelaran-kevitra hatrany, izay tsy tokony hiverenan-dalana fa mifamatotra amin’ny kolontsaina. “Maro ny fototry ny fahantrana ka ny politika avy amin’ny Banky iraisam-pirenena na ny FMI no ampiharina eto izay tsy mifanaraka amin’ny fihariana malagasy”, hoy Rajaonson Hugues.
“Tsy mijery ny maha olona ny politika eto amintsika, very hasina ny kolontsaina maha Malagasy, voalohany amin’izany ny fihavanana”, hoy ny Pr Ratrema William. Raha tsy mipetraka ny fahamarinana, tsy misy ny fifampitokisana ary very ny fihavanana. Jamban’ny vola ny maro noho ny fahantrana ka manjavona ilay hoe “Aleo very tsikalakalam-bola toy izay very tsy tsikalakalam-pihavanana”. Hevitra saika itovian’ny rehetra nandray anjara tamin’ny fihaonana izany. Mampitovy ny rehetra ny fahamarinana, mampitoetra ny fihavanana ka mampandroso ny fihariana.